Ihe ngwanrọ iji zọọ mpaghara nke roulette na ọsọ nke ìhè!
Roulette Turbo Clicker bụ ihe omume ntanetị nke ntanetị nke na-enye gị ohere ịkụ nzọ site na 1 ruo nọmba 37 na ihe na-erughị nke abụọ.
Ọ bụ nnabata bot bot ma enwere ike ịhazi ya na sọftụwia ọ bụla nke casinos n'ịntanetị.
Roulette Turbo Clicker: onye nwere ike iji ya?
Ọ nwere ike iji ndị hụrụ egwuregwu egwuregwu hụrụ n'anya ma ọ bụ ndị na-etinye usoro amụma ọhụụ (Visual Roulette), dịka ụfọdụ roulettes na-akpaghị aka na-enye gị ohere ịkụ nzọ ọbụna 10-12 sekọnd mgbe atụbara bọl na Roulette Turbo Clicker ọ dị mkpa ịkụ nzọ kwa nọmba 37 niile nwere naanị 1 sekọnd dị tupu mmechi nzọ.
Roulette Turbo Clicker ọ bụghị usoro egwuregwu, mana ọ bụ ngwa eji ya eme ihe, yabụ achọrọ usoro dị mkpa.
M na-echetakwara gị ka ị ghara igwu egwu roulette software, n'ihi na enwere ike ịmegharị ha ka onye ọkpụkpọ ahụ ghara ida karịa ezigbo roulette.
Roulette Turbo Clicker: mechichi na mbido mbụ
Roulette Turbo Clicker ọ naghị arụnye, yabụ ozugbo ebudatara (Akwadoro m ime ya na desktọọpụ), kpughee ebe nchekwa ahụ wee pịa na executable iji bido ngwanrọ ahụ.
Roulette Turbo Clicker ọ bụ ihe zuru ụwa ọnụ ma nwee ike iji ya na ntanetị niile dị n'ịntanetị n'ihi na ọ na-arụ ọrụ dị ka nke a: ozugbo ị mepere tebụl cha cha wee banye aha windo egwuregwu ị hụrụ na nyochaa gị, XY nchọpụta (aka nri n'elu aka nri) na, ọ bụrụ na aha ị banyere dabara n'ụzọ zuru oke (dị mkpa: akwanyere nnukwu ihe / lowercase), ọ na-acha akwụkwọ ndụ na-amalite na-egosi X na Y nrụtụ nke òké pointer dị ka ị na-akpali ya na gị na desktọọpụ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ozugbo ịhụ otú mfe ọ bụ iji melite Roulette Turbo Clicker, Chọọ maka vidiyo vidiyo na ► Youtube ọwa di ThatsLuck.
con Roulette Turbo Clicker ọ dịghị mkpa iji aka tinye usoro nke nọmba na kapeeti, jiri aka gị rụọ ọrụ nlele Kwado Spacebar Config ma tinye pointer pointer ahu n’etiti onu ogugu di iche-iche n’elu ute di egwu.
Site na ịpị igodo oghere na keyboard naanị mgbe òké dị n'etiti ọnụ ọgụgụ ahụ, nhazi ahụ ga-abanye n'ime usoro ihe omume ahụ na akpaghị aka!
Ọrụ ahụ na-ewe ihe na-erughị nkeji 1 ma ozugbo itinyere nhazi niile ị nwere ike ichekwa ha site na nhọrọ Savezọpụta.
N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ebe nchekwa gị maka tebụl ọ bụla na mgbe ị gbanwere casinos naanị bulite faịlụ ahụ (bọtịnụ ibu) ịdị njikere igwu egwu n'otu ntabi anya!
Ka anyị hụ otú ihuenyo mmemme si ele ihe anya mgbe edozichara ihe atụ Roulette Turbo Clicker na tebụl egwuregwu ịntanetị.
N’igbe dị n’elu aka ekpe (Windows Caption Casino) a ga-eji akara aka depụtakarị mpio egwuregwu nke ọma n’ihe metụtara ikpe, ma ọ bụghị na ahụghị tebụl ahụ.
N'ọhịa dị iche iche dị n'okpuru ebe a, enwere nchịkọta XY niile nke nọmba kapeeti, ebe n'aka nri enwere nhọrọ ndị ọzọ dị oke mkpa 2.
1.Chazi mbido tupu ịkụ nzọ: ọ bụrụ, dịka ọmụmaatụ, maka ihe ọ bụla ị chọrọ pịa bọtịnụ ọ bụla na cha cha ma ọ bụ n'otu isi na vidiyo TUPU Roulette Turbo Clicker malite na-atụ, dị nnọọ tinye na-achịkọta nke a ga-ekwe omume ebe / button na-elele igbe Tupu ịkụ nzọ Pịa.
2.Cochie clicks MGBE nzọ ndị ahụ: otu ihe ga-ekwe omume ịpị MGBE nzọ ahụ, na nke, dịka ọmụmaatụ, ngwanrọ nke cha cha chọrọ na mgbe ịtinye nzọ ahụ, ọ dị mkpa iji gosi ya site na ịpị na nkwenye bọtịnụ.
Iji mee ka ọ pịa Roulette Turbo Clicker nakwa na bọtịnụ a mgbe nzọ gasịrị, a ga-abanye nhazi nke bọtịnụ a na ihuenyo ma ga-enyocha nhọrọ ikwu.
Nke a mara mma nke ukwuu maka nhazi ahụ, ebe ị hụrụ na ọ bụ ọrụ dị mfe nke ga-enyere gị aka ijikọ Roulette Turbo Clicker na sọftụ cha cha ọ bụla dị n'ịntanetị!
Ihe dị mkpa: kemgbe Roulette Turbo Clicker achoputa nhazi nke bọtịnụ na ihuenyo gị n'ihe metụtara windo egwuregwu egwuregwu cha cha, ị nwere ike ịkwaga windo cha cha ahụ ebe ọ bụla ịchọrọ na desktọọpụ gị, mana cheta na ị gaghị enwe ike imegharị ya, dị ka nhazi nke nọmba na kapeeti agakwaghị adakọ!
M mere nwere ike ikwu na ị na-eji ndabara size nke egwuregwu window mgbe ọ ga-emepe na-agbanwe ha, dị kaỌbụna ịgbasa windo na ihuenyo zuru ezu ga-eme ka ọ ghara ịdị irè Roulette Turbo Clicker.
Ọ bụrụ na ị zutere nsogbu (òké ahụ na-akpali ma ọ pịaghị na nọmba), gbalịa belata ọsọ ọsọ.
Iji wedata ọsọ a (nke ndabara bụ 0 = kachasị), naanị tinye uru n'ọhịa Ké Pịa Speed n’ala ala aka nri.
Buru ụzọ tinye uru 100, ọ bụrụ na ọ ka anaghị abawanye uru na 200, 300, wdg ... uru 1.000 kwekọrọ na 1 nkeji, mana ọ ga-eme ka clicks dị nwayọ nwayọ n'etiti ha, uru dị n'etiti 25 na 200 kwesiri idozi ọtụtụ nsogbu.
Roulette Turbo Clicker: pịa na ọsọ nke ìhè!
Ozugbo atọrọ usoro ihe omume ahụ, ị ​​nwere ike mechaa malite ịkpọ egwu, yabụ ka anyị hụ ụdị ụdị nzọ akpaka ị nwere ike ịme.
Nzọụkwụ ndị ga-ekwe omume enweghị oke, na omume họrọ ọnụọgụ ole ịchọrọ ịkụ nzọ (ubi NUMBER), họrọ uzo nke onu ogugu dika ichikota na wheel roulette (site na ntughari aka na ntughari anya) na uzo ole ichoro iti nkpuru na onu ogugu obula (ubi UNITS).
Ozugbo e debere ụkpụrụ ndị a, dị nnọọ pịa ọnụ ọgụgụ nke kapeeti anyị chọrọ na Roulette Turbo Clicker ga-eme nke fọdụrụ!
Ọmụmaatụ: ọ bụrụ n'usoro egwuregwu gị ka ị ga-etinye ọnụ ọgụgụ na ndị na-eso ya 5 na ntanetị (mgbe niile dị ka ndokwa nke mpaghara roulette), họrọ '6' na ngalaba NUMBERS, wee họrọ Clockwise na mgbe ị na-etinye nzọ gị, pịa na ọnụ ọgụgụ kapeeti ịchọrọ: Roulette Turbo Clicker ga-egosi ọnụọgụ ahụ tinye nọmba 5 n'aka nri nke nọmba a pịrị apị na akụkụ nke abụọ, dị mfe!
Jiri ahụ igodo ọnụ ọgụgụ
Ọ bụrụ na ị dị ọsọ ọsọ iji ahụigodo ọnụọgụ nke keyboard PC gị, ịnwere ike ịme ọrụ a site na ịlele nhọrọ ahụ Jiri Numpad.
Itinye nzọ kama ịpị na òké na kapeeti nọmba, nanị pịa isi na usoro na ahụ igodo Ike, pịnyezie Nọmba, na n'ikpeazụ pịa igodo ahụ Tinye, na-adịkarị n'aka nri nke igodo Nhichapụ.
Roulette Turbo Clicker ga-etinye nzọ ahụ dị ka a ga - asị na anyị ejiri òké pịa na kapeeti nke usoro ihe omume ahụ.
Roulette Turbo Clicker: ugbua col akpaka gearbox!
N'ihi arịrịọ nke onye ọkpụkpọ ugbu a Roulette Turbo Clicker abịa na a ọhụrụ nhọrọ Nchekwa onwe.
Na omume, ọ bụrụ na cha cha ndụ ị na-egwuri egwu na ụzọ ọzọ nke ntụgharị nke roulette ma ọ bụ bọọlụ na ntụgharị ọ bụla, na-enyocha nhọrọ ọhụrụ D.Switch dị ka ọnụ ọgụgụ ahụ, mgbe ọ bụla nzọ usoro ihe omume ga-akpaghị aka ịgbanwe nduzi nke oru kwuru site klookwa (klookwa) na ccwise (anticlockwise).
Roulette Turbo Clicker: Betkpụrụ nzọ efu
Ihe mere ị ga-eji lekwasị anya naanị mpaghara nke roulette?
N'ihi arịrịọ maka ndị egwuregwu abụọ, emere m ọkwa ọhụrụ maka onye ọ bụla 2 akụkọ dị mkpa.
Nke mbụ bụ nhọrọ 'Nọrọ n’elu': ma ọ bụrụ na Roulette Turbo Clicker nke cha cha kpuchiri ya n'ihi na mkpebi desktọọpụ gị ezughị iji nweta ma, site na ịlele nhọrọ a Roulette Turbo Clicker ọ ga-anọ n’ihu windo ndị ọzọ ị mepere n’elu desktọọpụ.
Ihe nke abuo na nke kachasi mkpa bu uzo ohuru Kwụsị ịkụ nzọ.
N'ime ogwe a, ị nwere ike ịhọrọ ọnụọgụ ole ịchọrọ (nke ga-agbanwe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ) na ịpị igodo ahụ nzọ clicker ga-egosi ozugbo na nhọrọ gị.
Ma nke ahụ abụghị ihe niile, ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ nke nọmba ị nzọ bụ otu ihe mgbe ọ bụla ị na-atụgharị, ị nwekwara ike ịme nhọrọ ahụ Oghere SpaceBar.
N'oge a, kama ịpị iji òké na igodo Bet oge ọ bụla, ịkụ nzọ, dị nnọọ pịa (M nwere ike ikwu, otu oge!) Oghere ohere nke keyboard na ọ bụ ya!
Na mgbakwunye na inwe ike ịhọrọ ọnụọgụ ịchọrọ ịkụ nzọ na ntụgharị ọ bụla, ị nwekwara ike ịkwadebe ndepụta 12 iji rụọ ọrụ n'oge kwesịrị ekwesị!
con Roulette Turbo Clicker ị pụrụ n'ezie jikwaa na- 12 anatara nke nọmba ịkụ nzọ, ị nwere ike iji ha n'otu n'otu, kamakwa n'out oge!
Ka anyị lee igodo ndị dị ugbu a na ngalaba ọhụụ nke Ọnọdụ nzọ efu:
Gosi / Zoo Nsuso: bọtịnụ a na-egosi ma ọ bụ na-ezobe echiche nke ndepụta 12; na omume, ọ bụrụ na ị jiri ndepụta ole na ole wee cheta ọnụọgụ site na 1 ruo 12 ha metụtara, ị nwekwara ike zoo ndepụta ahụ wee kaa nọmba kwekọrọ na ndepụta nke nọmba ịchọrọ igosi, n'ụzọ dị otú a ngwanrọ ga weghara obere ohere na desktọọpụ.
Bugharịa ndepụta: Nke a button reloads / mmelite niile anatara. Ihe dị mkpa: Ekwesịrị ịpị oge ọ bụla ị gbanwere ndepụta ma chekwaa ya, n'ihi na a ga-agbanye ya ọzọ n'ime ebe nchekwa. Ọzọkwa, oge ọ bụla ịmalitere mmemme a ga-enwerịrị ndepụta ndị ahụ mgbe niile ịpị igodo a.
Họrọ Nsuso: bọtịnụ a na-akwado nhọrọ gị. Na omume, ị na-enyocha nọmba ndepụta site na 1 ruo 12 (ị nwekwara ike ịhọrọ ihe karịrị otu) yana site na ịpị bọtịnụ a ka nọmba nke kapeeti na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ (nke pụtara na ha bụ ndị ịkụ nzọ). N'oge a ị ga - pịa bọtịnụ nkwenye nzọ n'ezie kwụsị nhọrọ.
Dezie Nsuso: ma ọ bụrụ na ị chọrọ gbanwee otu ma ọ bụ karịa anatara nke nọmba ịkụ nzọ, nnọọ na ị ga-elele ndepụta ndepụta 1 ka 12 na ị nwere mmasị ma pịa bọtịnụ a. Ndepụta a ga-emeghe na kpochapụwo Windows Notepad ma ị nwere ike idezi ya dịka ịchọrọ. Mgbe ịmechara mgbanwe ndị dị mkpa, mechie faịlụ ahụ site na ịzaghachi Si ka ịzọpụta arịrịọ na ọpụpụ. Cheta na mgbe mgbanwe ọ bụla nke ndepụta ị ga-pịa bọtịnụ ahụ Bugharịa ndepụta imelite anatara.
Nsuso nchekwa: igodo a na-emepe folda mmemme nke nwere ndepụta 12 niile na usoro faịlụ ederede. Faịlụ niile nwere ike dezie dị ka ọdịnaya, ma kpam kpam ka a ghara ịkpọ aha ya. Na folda ị hụrụ faịlụ 12 niile, ị nwere ike idezi ha ka ịchọrọ, ozugbo emechie ma chekwaa, igodo ahụ ga-agbanye mgbe niile Bugharịa ndepụta imelite anatara na usoro ihe omume.
Ọzọkwa na Free Bet Mode ọ ga-ekwe omume iji Onyinye dịka na Ọnọdụ Bet Sectorial, mana na nke a nhọrọ na ahụigodo ahụ egosighi ọnụ ọgụgụ ahụ ozugbo, kama ọ na-ahọrọ ya, dị ka a ga-asị na ịpị nọmba nke usoro ihe omume ahụ mgbe ha gbanwere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, n'eziokwu ozugbo a mechara nhọrọ ahụ , nzọ nzọ nọmba ndị a ka ị ga-pịa bọtịnụ ahụ nzọ, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, enwere ike dochie anya ya maka ịdị mma site na igodo ohere na keyboard ma ọ bụrụ na enyochala nhọrọ ahụ Oghere SpaceBar.
Nbudata Nbudata	RTClicker.zip - 2 MB